TOP NEWS: Nabad Sugida Soomaliya oo Shaacisay Magaca Sarkaal Alshabaab ka tirsan oo Ciidanka NISA ay Gacanta ku dhigeen – Kismaayo24 News Agency
by Tifaftiraha K24 11th October 2016 048
Ciidanka Nabad Suggida Somaliya ayaa gacanta ku dhigay Sarkaal ka tirsan Ururka Al Shabaab, kaasi oo lagu qabtay Degmada Yaaqshiidm gaar ahaan Xaafada Suuq bacaad, xilli ninkaasi uu halkaasi dhigay gaari waxyaabaha qarxa uu ku soo xiray.
Sarkaalkaan ciidamada NISA Ay qabteen ayaa shalay wuxuu gaari miineysan soo dhigay Suuqa labaad ee ganacsiga Suuq Bacaad, agagaarka Masaajidka Sheekh Cilmi, balse xogta gaarigaasi ayaa waxaa haayay ciidamada NISA.
Ciidanka NISA ayaa gacanta ku dhigay Sarkaalkaan ka tirsan Al Shabaab, inkastoo uu qarxay gaarigii uu qaraxa ku soo xiray ee uu soo dhigay Suuq Bacaad.
Afhayeenka Maamulka Gobolka Banaadir C/fataax Xalane, ayaa sheegay ninkaasi markii ay gacanta ku dhigeen hay’adaha ammaanka Dowladda inuu sheegay inuu ka yimid Magaalada Baraawe ee Gobolka Shabellaha hoose.
Ninkaan oo da’diisa lagu sheegay 37-sano jir ayaanan weli si rasmi ah loo shaacin magaciisa, balse Hay’adda Nabad Suggida Iyo Sirdoonka Qaranka Somaliya ayaa baaritaan ku haysa.
Xasaasi: Puntland oo Dagaalka Galkacyo ku Eedeysay in ay Masuul ka tahay Dowlada Federaalka.. Hadaba Maxay tahay Sababta?????
DegDeg:- Qarax khasaara geystay oo Ka Dhacay Mooyaale
admin 26th June 2016 26th June 2016